चीनले ताइवानको आकासमा एकैपटक २५ वटा युद्ध विमान पठाएपछि…. « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
चीनले ताइवानको आकासमा एकैपटक २५ वटा युद्ध विमान पठाएपछि….
चीन । चीनले २५ वटा सैन्य विमान आप्mनो हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा पठाएको भन्दै ताइवानले आपत्ति जनाएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना दिवसकै दिन (शुक्रबार) चीनले ताइवानको स्वशासित टापु नजिकै एकसाथ २५ विमान पठाएर शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसप्रति ताइवानले आपत्ति जनाएको हो । चीनले भने विमान पठाइएको टापु क्षेत्रलाई आफ्नै क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । बेलायतले ताइवानमा दुई युद्धपोत पठाएको आरोप लगाएको अर्को साता चीनले पनि ताइवानमा २५ सैन्य विमान पठाएको हो ।
यसअघि पनि चीनले पटकपटक ताइवानको रक्षा क्षेत्रमा युद्ध विमान पठाइसकेको छ । जसको ताइवानले विरोध गर्दै आएको छ । ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनले २२ लडाकु, दुई परमाणु बमवर्षक र एक पनडुब्बी विरोधी विमान आप्mनोे रक्षा क्षेत्रमा पठाएको जनाएको छ । गत साता ताइवानले ट्रान्स प्यासिफिक व्यापार सम्झौतामा समावेश हुन आवेदन दिएपछि चीनले आप्mनो २४ विमान ताइवानको क्षेत्रमा पठाएको थियो । चिनिया नेताहरुले ताइवानलाई एक दिन कब्जा गर्ने प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् । आवश्यक परेमा बलपूर्वक कब्जा गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
२०१६ मा ताइवानमा राष्ट्रपति निर्वाचनपछि चीनलाई दबाब बढ्न थालेको जानकारहरु बताउछन् । ताइवानमाथि चिनिया गतिविधिलाई लिएर अमेरिकाले भने चीनको आलोचना गर्दै आएको छ । ताइवानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति साइ इङ वेनसहितका नेताहरुले चीनबाट अब ताइवान स्वतन्त्र भएको प्रतिक्रिया दिन थालेपछि चीनले यस क्षेत्रमा थप गतिविधि बढाउदै लगेको हो ।